အများစုမှာဆိုင်ကယ် Friendly ဥရောပခုနှစ်တွင်မြို့နှင့်မည်သို့ရှိပါ Get ရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အများစုမှာဆိုင်ကယ် Friendly ဥရောပခုနှစ်တွင်မြို့နှင့်မည်သို့ရှိပါ Get ရန်
သင်သည်တာရှည်ဥရောပရဲ့အချို့ကိုကြည့်ဖို့လိုလျှင် ရပါမည်-အလည်အပတ်ခရီးစဉ်, အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့ကြီးများ၏အနည်းငယ်ဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စာရင်းစေမည်. ဤရွေ့ကားမြို့ရွာတို့ဆိုင်ကယ်အားဖြင့်စူးစမ်းဖို့အကြီးအများမှာ, အဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင် ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာ. တဖန်သင်တို့ရထားရှိရနိုင်. ဤတွင်ဥရောပတိုက်တွင်ဆယ်အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်:
1. စက်ဘီး-Friendly အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
အမ်စတာဒမ်တသမတ်တည်းဥရောပမှာအများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့တို့တွင်ခဲ့. ဒါဟာသံသရာပုဒ်အစားလမ်းကြောင်းကွဲကွာလိုက်ပါတယ်, သငျသညျနေရာတိုင်းကိုသွားခွင့်ပြု ကားတစ်စီးလွတ်. သင်အလွယ်တကူကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ပဲရစ်ကနေရထား, ဘရပ်ဆဲလ်, ကိုပင်ဟေဂင်နှင့်အခြားအဓိကဥရောပခရီးစဉ်.
2. စက်ဘီး-Friendly ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်
ကိုပင်ဟေဂင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ € 134 သန်းကျော်က၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့ စက်ဘီးစီးကွန်ယက်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ. ဒါကသူတို့ရဲ့သံသရာလမ်းကြောင်းကွန်ယက်ကိုအထင်ကြီးအောင်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့နှင့် greenest အကြားဖြစ်ကိုပင်ဟေဂင်စတင် ဥရောပခရီးစဉ်.
3. စက်ဘီး-Friendly ဘာလင်, ဂျာမနီ
ဘာလင်ခဏဥရောပမှာအများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့တဖြစ်လာရန်ကြိုးစားအားထုတ်ထားပါတယ်. သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာဖန်ဆင်း, အဆိုပါစက်ဘီးစီးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုပီပီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကျေးဇူးတင်စကား. ဥရောပရထားအသွားအလာများအချက်အချာတစ်ဦးအဖြစ်, ဘာလင် အတော်လေးဖြစ်ပါသည် ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူပါတယ်.
4. Utrecht, နယ်သာလန်
ထဲမှာမြို့ကြီးများ နယ်သာလန် သူတို့ရဲ့စက်ဘီးကိုချစ်. Utrecht သည်၎င်း၏စက်ဘီးတွင်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည် အခြေခံအဆောက်အဦများ. Long ကစက်ဘီးလမ်းများနှင့်ကြီးမားသောယာဉ်ရပ်နားအဆောက်အဦကလွယ်ကူအဲဒီမှာစက်ဘီးကိုသုံးပါစေ.
ပဲရစ် Utrecht ရထားမှ
5. Antwerp, ဘယ်လ်ဂျီယံ
Antwerp ဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့အများဆုံးစက်ဘီး-ဖော်ရွေသောမြို့ဖြစ်၏, တစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အတူ ကွန်ယက်ကို စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်း၏. နောက်ထပ်ပြုလုပ်တိုးတက်အောင်ရည်ရွယ်ကြီးမားသောစီမံကိန်းများနှင့်အတူ, Antwerp ဧကန်အမှန်ဥရောပမှာထိပ်တန်းစက်ဘီးစီးခရီးစဉ်တို့တွင်အနေဖို့ပါလိမ့်မယ်.
ဗီယင်နာ ပထမဦးဆုံးဥရောပရဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဝါကြွား ကုန်တင်ဆိုင်ကယ် ငှားရမ်းသည့်စနစ်. မြို့သူမြို့သားရက်ရက်ရောရောဗီယင်နာကပိုစက်ဘီး-ဖော်ရွေသံသရာလမ်းခရီးကွန်ယက်၏ 1300 ကီလိုမီတာတည်ဆောက်နေသည်စေရန်ကမကထပြုသောအခြားအစပျိုးတွေထဲမှာ.
7. ဘေဆယ်, ဆွစ်ဇာလန်
ဘေဆယ်ရဲ့အနည်းငယ်အရာများအတွက်လူသိများ, နှင့်ဆိုင်ကယ်-friendly ဖြစ်ခြင်းသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. မည်သည့်ရာသီဥတုသို့မဟုတ်ရာသီအတွက်, သင်အလွယ်တကူန်းကျင်သွားလာရန်သူတို့ရဲ့စက်ဘီးကို အသုံးပြု. ဘေဆယ်၏ဒေသခံများကတွေ့မြင်နိုင်သည်. သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်ရထားအမ်စတာဒမ်ကနေဘေဆယ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်.
8. ရောဂါ, ဂျာမနီ
အနက် ဂျာမဏီရဲ့ အများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့ကြီးများ, ရောဂါတစ်တသမတ်တည်းကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စောင့်ရှောက်. အဆိုပါမြို့စက်ဘီးစီးယင်း၏စက်ဘီးစီးအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်ကိုသေချာစေရန်ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်.
9. Verona, အီတလီ
အီတလီမြို့ကြီးများများသောအားဖြင့်ဥရောပမှာအများဆုံးစက်ဘီးဖော်ရွေမြို့တို့တွင်မဟုတ်, ဒါပေမယ့် Verona အတော်လေးကောင်းစွာရပ်တည်. ဒါဟာတစ်ဦးမြို့ကြီးရဲ့ စူးစမ်းလေ့လာ စက်ဘီးအားဖြင့်, နှင့်ကနေရထားစီး ရောမမြို့ Verona မှသာသင့်၏ဂုဏ်အသရေမှဖြည့်စွက် ခရီးသွားခြင်း.
10. မြူးနစ်, ဂျာမနီ
မြူးနစ် တစ်ကျယ်ပြန့်စက်ဘီးကွန်ယက်ကိုဇုန်တည်ဆောက်ရန်နှင့်စက်ဘီးစီးအခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်စေရန်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်. အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ကaကိုရောက်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ် 30% စက်ဘီးအဘို့အပုံစံများဝေစု. သင်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ပေါ်မြူးနစ်န်းကျင်ရတဲ့စမ်းချင်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျဘာလင်ကနေရထားနဲ့အဲဒီမှာခရီးသွားလာနိုင်, ဗီယင်နာ, နှင့်ဇူးရစ်, အခြားမြို့များအကြား.
သင်၏စက်ဘီးနှင့်ရထားကိုသာအသုံးပြုပြီးဥရောပ၏အကောင်းဆုံးနေရာအချို့သို့လည်ပတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သည်? တစ်သက်တာ၏စွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့် Get, နှင့် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် စောစော!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#စက်ဘီး - ဖော်ရွေ #စက်ဘီး စက်ဘီး bikefriendly europetravel ရထားခရီးသွား